Izay Apple MacBook solosaina findainy tokony mividy? - News Fitsipika
Mary mila hisolo azy 2009 MacBook Pro fa reraka ny safidy. Izany Fanahy izany no safidy tsara indrindra?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Izay Apple MacBook solosaina findainy tokony mividy?” dia nosoratan'i Jack Schofield, fa theguardian.com ny alakamisy faha-15 Novambra 2018 10.00 UTC
Efa soldiered amin'ny amin'ny 2009 MacBook Pro, izay ampiasaina amin'ny aterineto, haino aman-jery sosialy, sary, ary ny fikarohana. Fa mba hahazoana ny trano famakiam-boky oniversite lavitra, Tsy maintsy mampiasa ny niakatra-to-daty rafitra fandidiana, ary ny Mac no izy antitra aho, ka tsy afa-intsony izany vaovao farany.
Noho izany, Mila mividy vaovao MacBook, fa izaho kosa tototry ny safidy. Mila ve aho Touch Bar? Ohatrinona ny fahatsiarovana sy ny SSD no mila? Mary
Taorian'ny vokatra velombelomy amin'ny 30 Oktobra, Apple manana MacBooks efatra izay manao toy izany koa be asa. Ny vaovao tsara dia, raha afaka ho velona amin'ny 2009 MacBook Pro, misy azy ireo ho tsara noho ny tanjona. Ny vaovao ratsy dia hoe izy rehetra manana lafin-javatra izay handroboka ahy eny mividy azy ireo, anefa, amin'ny vintana, dia tsy voatery hametraka anao eny.
Na izany aza, Aho Heveriko fa zava-dehibe ny hitsidika ny Apple Store na stockist hafa mba azo oharina, fara fahakeliny, 13in lafiny roa amin'ny lafiny MacBooks. Ireo no antitra MacBook Air (Ohatra tsara indrindra, ratsy indrindra efijery) ary ny MacBook Pro (Ohatra mahatsiravina, lehibe efijery).
Afaka milaza aminareo aho izay poti-dia haingana, sy ny sisa, fa ny zavatra niainany dia ho anjakan'ny ny kalitaon'ny ny fitendry sy ny lamba fanakonana. Ny bilaogy tsy afaka milaza aminareo izay olona ho toy ny, na izay mety ho marimaritra iraisana kokoa ny.
Mac vaovao rehetra solosaina avy amin'ny Apple ny iva-Travel Lolo fitendry, izay efa voaporofo misara-bazana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ho ahy, ny lehibe indrindra amin'ny vaovao olana MacBooks dia ny lolo fitendry, izay nampidirina voalohany tamin'ny 12in MacBook in 2015. Ny dika faharoa niseho tao MacBook matihanina, izay maro mpampiasa nanana Ohatra tsy fahombiazana noho ny vovoka na detritus mahazo ambanin'ny fanalahidy. Ny farany MacBooks manana dika fahatelo amin'ny famehezana fanampiny mba avy vovoka. Manana mbola mba hijery ny fomba mitsangana ka rehefa mandeha ny fotoana.
Ankoatr'izay, Hitako ny lolo fitendry manome traikefa mahatsiravina fanoratana. Nianatra mikasika-karazana eo amin'ny milina fanoratana, ary Aleoko-panendry amin'ny milina fanalahidy amin'ny maro ny mandeha. Lolo fanalahidy manana saiky tsy Travel. Izany no manosika ahy ho any MacBook Air taloha, izay tena tsara manana fitendry solosaina findainy amin'ny alalan'ny fitsipika.
Mampalahelo fa, taloha MacBook Air manana olana hafa. Manokana, ny touchpad sy ny lamba dia ratsy noho ny olona ao amin'ny MacBook Air vaovao. (Tsy ry zareo ratsy, fa tsy tahaka ny tsara.)
Soa ihany, tiany mitovy. Ny olona sasany fisaka kokoa, tsy mihontsina-panendry, ary mety hahita anareo toy ny lolo fitendry. Raha izany, mahatonga ny safidy mora kokoa. Miteny fotsiny aho hoe mila manome azy handeha lehibe - manoratra teny vitsivitsy eo aminy jato - eo anatrehanao hanolo-tena mampiasa azy io isan'andro mandritra ny tontolo andro ... na mitondra ny ivelany USB fitendry manodidina.
Ny Touch Bar manolo ny F fanalahidy teo amin'ny MacBook Pro. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tsy mila Touch Bar. Raha ny tena izy, tsy misy olona tena mila ny Touch Bar. Na izany na tsia, izy ireo ihany no manify ny lafo kokoa MacBook matihanina, ary mihevitra ianao fa tsy te hividy lafo kokoa noho ianao MacBook mila.
The 13tamin'ny tapaky ny volana 2009 MacBook Pro Intel Core nanana 2 Duo processeur, izay tsarotra ny amin'izao fotoana izao ny fitsipik'Andriamanitra. Ny modely base ihany no nanana ny fahatsiarovana 2GB (expandable ny 8GB) ary ny 160GB fiara mafy, Anisan'ny fomba amam-panao na fanavaozana 128GB sy 256GB SSDs. Ny ambany toetra MacBook amin'izao andro izao dia afaka mividy dia hanana fepetra arahana tsara kokoa.
Indrisy, tsy afaka amin'izao fotoana izao hanatsarana ny MacBooks, dia tsy maintsy mividy betsaka araka izay hery mandrakizay dia mila. ho ela velona, dia ho tsara kokoa ny manana 16GB ny fahatsiarovana sy ny 256GB na lehibe kokoa SSD, Fa nasain'i Apple Premium goavana ho an'ireo fanavaozana.
Soa ihany, MacBooks mihazona ny vidiny tena tsara, toy izany koa ny hafa dia ny handeha ho amin'ny fototra spec sy, raha mahita ianao mila hery bebe kokoa, amidy ka hividy vaovao iray.
Ny MacBook Intel dia mampiasa ny ambany-pahefana processors. Sary: Paoma
Misy tsy mazava olana eo dia nisy roa lahy ny mety Intel Core no MacBooks M processors, izay marimaritra iraisana eo amin'ny hafainganam-pandeha mba hanome fiainana tsara kokoa bateria. Apple nanandrana izany voalohany tamin'ny fiaviana roa-1.1GHz fototra M-5Y31 Chip ampiasaina ao amin'ny 2015 MacBook (12in efijery). ankehitriny, Fototra M poti dia tsy ampiasaina afa-tsy 12in MacBooks, fa koa amin'ny farany MacBook hiseho hahalala.
Tsy miharihary, satria nanova ny fanomezana anarana Intel rafitra. Ny olona izay mety ho hanaisotra ny "Core M" fanendrena mety tsy jereonareo fa izy ireo mahazo ny andian-dahatsoratra Y Chip - manokana, iray Core i5-8210Y - fa tsy ny andian-dahatsoratra mahery kokoa U poti mahazatra ampiasaina amin'ny solosaina.
Tsy misy an'i Core M / Y andian poti, ary ny 8GB / 128GB mikasika-efijery Lenovo Yoga 700 dia toy izany koa Core M3-6Y30 ampiasaina ao sasany MacBooks. Ny fahasamihafana dia fa misy milina ho an'ny tsotsotra / fialan-tsasatra fampiasana, tsy ny tena ihany no rafitra ary lafo ahy £ 339,99. Tsy tiako tsy mividy iray tahaka ny milina lehibe, ary mamaly ny £ 1200 fa iray ihany no mahatsikaiky.
A Core i5-8210Y tokony ho ampy ho haingana ny fahazavanao mampiasa - izay mety mitombo tsikelikely - fa mbola zava-dehibe noho ny vola mahantra ao amin'ny MacBook Air.
azo atao ny safidy
Ny antitra Apple MacBook Air. Sary: Simon Lees / Future Publishing / REX
Apple no nihazona ny taloha MacBook Air 13in, Ary mijery ny tsara indrindra amin'ny vidiny vola £ 949, na dia eo aza ny fahadimy-taranaka Core i5-5350U processeur sy ny tsy temimaso efijery. manana, ny fahitako azy, Ohatra ny tsara indrindra, ary mbola tsara efa lany seranana, anisan'izany ny karatra SD slot sy ny magsafe connector. Amin'ny lafiny hafa rehetra, MacBook Air vaovao (2018) lavitra ambony.
Ny ela 12in MacBook Mbola misy, saingy underpowered sy overpriced, miaraka amin'ny 1.2GHz Core M3-7Y32 Bible (2017) niaritra £ 1.249. Ny hany antony mihevitra milina io dia izy no kely indrindra ary mampirehitra (0.92kg) MacBook dia afaka mahazo.
Ny vaovao MacBook Air 13in dia kely sy maivana kokoa noho ny taloha dikan-, ambony lavitra manana efijery, ny hery lehibe kokoa mikasika trackpad-, ary tsara kokoa mpandray fitenenana. Izany ihany koa ny amin'ny £ lafo kokoa 1.199. Ny lafiny ratsy fitendry ahitana ny lolo sy ny Core M / Y andian-dahatsoratra processeur.
Farany, misy ny 13in MacBook Pro tsy misy Touch Bar (tapaky ny taona 2017), izay manome haingana taranaka fahafito-2.3GHz Core I5 (7360The) processor, sary tsara kokoa sy tsara kokoa loko dikan-ho fanampiny £ 50, izany hoe £ 1.249. Ny Pro ihany koa dia manana mamirapiratra efijery - 500 nits fa tsy 300 nits - izay tokony ho tsara kokoa noho ny fampiasana ivelan'ny trano. Ianao very ny Air ny anja endrika, izay mampahazo aina kokoa ho an'ny fanoratana, fa ny Pro tsy be mavesatra noho ny Air vaovao (1.37kilao vs 1.25kg).
Te ny MacBook Pro kokoa raha nanana ny taloha Air fitendry, fa toa ahy fa ny tsara indrindra Buy - raha afaka manam-bola izany. Mieritreritra ihany koa aho fa ny tsara indrindra ho an'ny hoavy Bet rafitra miasa fanavaozam-baovao.
fanavaozana ireo, araka ny voalaza, lafo. Mitombo ny Pro ny 8GB ny fahatsiarovana azy 16GB ny vidin'ny £ 180, ary Hanavao ny 128GB SSD ho 256GB ny vidin'ny £ 200, toy izany koa ny spec tena tianao ny vidin'ny £ 1.629. Manampy AppleCare Price midona amin-ny farany ho amin'ny £ 1.878.
Tena be ny vola, fa mihevitra azy ho toy £ 1 andro ny dimy taona ka tsy hahatsapa izany ratsy.
Amin'ny maha-mpianatra nahazo diplaoma, tokony mendrika ho an'ny fanabeazana fihenam-bidy, izay hampidina ny vidiny. Jereo mba hahitana raha ny tsara indrindra dia ny hanao izany amin'ny alalan'ny ny oniversite, -tserasera, na ny Apple Store.
Apple ihany koa dia manolotra ny varotra-ins amin'ny alalan'ny fitaovana taloha ny Avereno tetika. Tsy fantatro fa tena tiako ianao tsy mahazo ny serial isa ny MacBook Pro. Tena azo inoana fa tsy betsaka, fa, fara fahakeliny, ny antitra warhorse dia hatao araka ny tokony ho amboarina.
16442	3 Izay Apple MacBook solosaina findainy tokony mividy?
← OnePlus 6T Review The 20 fitaovana tsara indrindra ny 2018 →